Ku keydi $ 50 Suuqgeyntaada PRO Xubinnimada PRO | Martech Zone
Ku keydi $ 50 xubinimadaada suuq-geynta PRO
Sabtida, Janaayo 5, 2013 Sabtida, Janaayo 5, 2013 Douglas Karr
Haddii aadan hubin qaar ka mid ah faa'iidooyinka cajiibka ah iyo koorsooyinka laga heli karo SuuqaProfs, runtii waa inaad. In ka badan 10 sano, MarketingProfs waxay muujisay xirfadlayaal waxa run ahaantii shaqeeya - iyo waxa aan shaqeyneyn - suuqa maanta.
Xubinnimada Aasaasiga ah waxaa ka mid ah helitaanka maktabad hodan ah oo ah maqaallo iyo joornaallo. Xubinnimada PRO waxay ku dareysaa sida loo sameeyo siminaaro, gaaban Qaado 10 webcasts, dhiirigelin uruurinta Daraasaadka Kiiska, SmartTools waxtar leh, iyo inbadan. Ku soo biir maanta, oo baro sababta in ka badan 492,000 xirfadlayaal ahi ugu tiirsan yihiin MarketingProfs si ay uga caawiso iyaga inay dhisaan barnaamijyada suuqgeynta ee shaqeeya.
Ku soo biir maanta adoo adeegsanaya lambarka kuuboon DKVIP oo waxaad heli doontaa $ 50 qiimaha PRO ee $ 279!
Internet-ka waxaa ka buuxa talooyin suuq-geyn ah, talo-siinta suuq-geynta, iyo khubaro ku xeel-dheer suuq-geynta — laakiin inta badan waxa meesha ka jira ama waa qashin saafi ah ama runtii jahwareer ah in la ogaado. Kooxda tifaftirka 'MarketingProfs' ayaa jaraysa dhammaan qeylada suuqgeynta ah si ay u helaan khubarada iyo suuqleyda gudaha ugaarsada ee og waxa ay ka hadlayaan. Waxay qaataan aqoontooda waxayna ku qasaan caqliga suuqgeynta si ay ugu beddelaan talo wax ku ool ah oo aad dhab ahaan ugu isticmaali karto joornaaladayada, shirarka, aqoon-isweydaarsiga, Podcast, maqaallada, iyo degellada.
Waa inay si sax ah usameynayaan, waa shirkad malaayiin dollar ah oo u adeegta bulsho ka badan 492,000 ganacsato, milkiileyaasha ganacsiyada yaryar, iyo xirfadlayaal suuq geynaya shirkadaha waaweyn ee adduunka.
Kaar Ganacsi Gaar ah U er Chip
Dib-u-shaqeeyn: Soo-saar Mawduuc ka wanaagsan si is-daba joog ah